ATLETISMA HO AN’NY JAMBA : Nomena mari-pankasitrahana manokana i Zéphirin Clément
Anisan’ny notoloran’ny Fanjakana mari-pankasitrahana ara-panatanjahantena i Zéphirin Clément, 38 taona, monina ao Tanamakoa Toamasina, noho ireo zava-bitany ho an’ny fanatanjahantena malagasy. 29 juillet 2017
Jamba ny lehilahy saingy mampiteny ny anarany amin’ny atletisma natokana ho an’olona jamba.
Ny taona 1999 izy no nanapa-kevitra niroso tao anatin’ny atletisma. Nisesisesy ireo vokatra azony. Manavanana azy ny hazakazaka 200m. Ny taona 2003, izy no nisolo tena an’i Madagasikara tamin’ny Lalaon’ny Nosy natao tao Maurice. Teo amin’ny laharana fahatelo no nisy azy tamin’izany fotoana izany. Ny taona 2012 dia nandray anjara tamin’ny Lalao Afrikanina natao tany Maputo, ka nahazoany medaly alimo ihany koa. Ny taona 2013, dia nisy ny fandraisana anjara tamin’ny « Meeting des athlètes », izay natao tao Frantsa nandraisan’ny mpihazakazaka avy amin’ny firenena maro anjara. I Zéphirin ihany anefa no atleta voafidy nisolo tena an’i Madagasikara. Ny taona 2003 ka hatramin’izao, dia izy hatrany no voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny sokajy 200 m.
Manambady i Zepherin ary manan-jakana lahy iray. Na dia jamba aza ny tenany, dia mitondra avo ny lazan’i Madagasikara maneran-tany eo amin’ny taranja hakazakaka 200m natokana ho an’ny olona jamba. Ny volana jolay izao izy dia handray anjara amin’ny fifaninanana hatao any Antsiranana ny tenany. « Hazakazaka lavitr’ezaka anaty kirihitr’ala no hatao amin’io fotoana io », araka ny fanazavany. Mendrika hotohanana fatratra ity atleta malagasy ity. Izy izay nilaza ny mbola hanohy hatrany ireo zava-bita tsara mba ho reharehan’ny Malagasy.